Jawaari: Banaadir lama raacin karo federal kale! - Caasimada Online
Home Warar Jawaari: Banaadir lama raacin karo federal kale!
Jawaari: Banaadir lama raacin karo federal kale!
Muqdisho (Caasimada Online) – Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Somaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa wuxuu si xoogan uu kaga digay in Gobolka Banaadir lagu daro Maamulka la filaayo in loo dhiso Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.
Saddexda arrimood ee warqadda ku xusan
In lagama maarmaan ay tahay in la ilaaliyo Dastuurka Qabyo Qoraalka, oo oranaya Caasimadda laguma biirin karo Maamul Goboleed.
In dib u eegista Caasimadda loo baahan yahay afti dadweyne, iyadoo aan la helinna aan meelna lagu biirin karin.
In labada gole ee Dowladdu dib u eegis ku sameeyan, go’aanna ka qaataan marka shacabku u codeeyan Caasimadda. Haddii ay keli u taagnayn laheyd iyo haddii Maamul Goboleed la raacin lahaaba.